Yenza eyakho i-aquarium | Ngeentlanzi
Yenza eyakho i-aquarium
Xa ukhetha i-aquarium asisoloko sisazi ukuba loluphi uhlobo olulungele iimfuno zethu. Ukuba uyi Umthandi we-DIY kunokwenzeka ukuba wenze eyakho i-aquarium, Kodwa oku kubaluleke kakhulu ukuba uqwalasele ubukhulu beekristali oza kuzithenga, kuba ubungakanani obahlukeneyo be-aquarium buhambelana noxinzelelo lwamanzi ahlukeneyo kwaye, ngokwahlukeneyo, ubukhulu beglasi.
Ke ngoko, xa usenza i-aquarium kubalulekile ukudibana neetafile ezinxulumene nezinto eziphakamileyo ze-aquarium, ubude kunye yikristale ubukhulu.
Kukulungele ukubeka isiciko seglasi okanye ipleyiti ngaphezulu kwe-aquarium njengoko oku kuya kuthintela umphunga ogqithisileyo wamanzi e-aquarium kwaye iya kuvumela gcina ubushushu obungapheliyo. Indawo ebekwe kuyo ilunge kakhulu ukuba ithambe kakuhle, ukuze amanzi oxineneyo ajolise kwicala elinye, abuyele kwi-aquarium.
Ngokumalunga nobukhulu be isiciko se-aquariumKuyacetyiswa ukuba ibe nobubanzi obulinganayo njenge-aquarium ukuze ikwazi ukuyibeka kuyo, kodwa ubude bayo kufuneka bube ngaphantsi kobo be-aquarium ukuze kubekho indawo engatyhilekanga kumacala omabini ayo. Esi sithuba siyimfuneko ukuze sikwazi ukwazisa iintambo ze-thermostat, iityhubhu zokucoca ulwelo kwaye ukwazi ukondla iintlanzi.
Ukuba kwelinye icala ufuna ukuyithenga ngqo ukuze ungazenzi izinto nzima, kukho iintlobo ezininzi, zonke zineendonga zeglasi ezifanayo, kunye nobukhulu obuhluka ngokuxhomekeka kubungakanani bayo, umthamo wamanzi oqulatheyo kunye noxinzelelo lweekristale ekufuneka lumelane nalo.
Kukwakho nohlobo lwamathambo i-aquarium yeyona nto ihambelana neemfuno ezibalulekileyo zazo zonke iintlobo zeentlanzi ezihlala zihlala emanzini asekhaya. Ke ngoko kuyacetyiswa yiyale ngaphandle ukhetho lokufumana i-aquarium yeglasi okanye yohlobo lweendawo zeplastiki ezihlala zifumaneka kwezinye iivenkile ezikhethekileyo kuba zinqongophele kakhulu njengoko zinendawo encinci edibene nomoya kwaye ziphazamisa ukubonakala kwangaphandle ngenxa yobume bayo obungqingqwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ii-Aquariums ze-DIY » Yenza eyakho i-aquarium
Ungayinyanga njani i-betta fish ye-parasites